Ukuwa Amanzi Colo Vale
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguDeb
Ukuba ujonge impelaveki yothando, ukubaleka ngokukhawuleza okanye ukubaleka ngokuzolileyo kwindawo entle, iFalling Waters Colo Vale inakho konke. Ikhabhathi yelog egcweleyo egcweleyo enomlilo ovulekileyo, ibhedi enkulu elingana nenkosi.
Ukubiyela isilwanyana sasekhaya esikhuseleke ngokupheleleyo.
Njengebhonasi eyongeziweyo sifumaneka kwimizuzu eli-15 kude ne-wineries yaseMazantsi eHighlands kunye nayo yonke into enokuthi inikezelwe yiSouthern Highlands.
Kuyimfuneko ukuba ugonywe kabini kwaye uvelise isatifikethi sokugonya. Kukho kwakhona ikhowudi ye-QR.
I-log cabin yindlu yokuqala eyakhiwe kwipropati. Ikhabhine ibekwe kufutshane nendlu enkulu, kodwa izimele kakhulu.
Amagumbi okulala amabini amakhulu, elinye libonelela ngebhedi enkulu yeKumkani, elinye igumbi elinebhedi ephindwe kabini ezantsi kwaye elinye phezulu. Kukho igumbi lokutyela eliphangaleleyo elinendawo yomlilo kunye neenkuni ezininzi zokukugcina ushushu. Ukuzonwabisa kukho iTV kunye neFoxtel. Ungaphumla kwaye uhlale kwiveranda kwaye ujonge indawo emangalisayo kunye nokuzola okunikezwa yi-Falling Waters.
Sime kwiihektare ezingama-35, ukuba uhamba / uhambahamba kukho iindlela ezininzi zokuhamba kwipropathi ukhululekile ukuhambahamba kodwa siyakucela ukuba ukuba unesilwanyana sasekhaya kunye nawe nceda ugcine isilwanyana sakho sasekhaya sikwintambo ngenxa yenyani. ukuba umhlaba unamatyholo amaninzi kunye nezilwanyana zasendle.
Ipropathi ineemilanjana ezi-3 ezihamba kuyo kunye nomwonyo omkhulu osezantsi ezantsi kwendlela kunye neengxangxasi ezincinci.
4.98 · Izimvo eziyi-56
Sime kwimizuzu eli-15 ukusuka eBowral naseBerrima kunye nemizuzu esi-8 ukusuka eMittagong kwaye iindawo zewayini zikufuphi. Iindawo eziphakamileyo zaseMazantsi ngummandla omangalisayo onezinto ezininzi zokuzibona nokwenza.
Umbuki zindwendwe ngu- Deb
I'm married, I have 2 children, 3 golden retrievers. I love hosting and making sure everyone is comfortable.
Ukuba iindwendwe zifuna naluphi na ulwazi okanye nantoni na, ungaqhagamshelana nam kwiselula yam.
Inombolo yomthetho: PID-STRA-1738-2
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Colo Vale